आँखा नदेख्ने ४ छोराछोरी हुर्काउँदै आएका लक्ष्मणलाई फेरी पर्यो अर्को वज्रपात – Khabaarpati
December 16, 2020 December 16, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on आँखा नदेख्ने ४ छोराछोरी हुर्काउँदै आएका लक्ष्मणलाई फेरी पर्यो अर्को वज्रपात
काठमाडौ । इटहरीमा एउटा परिवार छ जुन परिवारका ४ छोरा छोरीहरु कसैले पनि आँखा देख्दैनन् । उनीहरुले भोगेका समस्याका बारेमा युट्युवमा सार्वजनिक भएको थियो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
तर सोही परिवारमा थप ठूलो बज्रपात परेको छ । दृष्टिविहिन भएर थलिएका इटहरी -२ स्थित लक्ष्मण तामाङका जेठो छोराको मृत्यु भएको छ। आँखा नदेख्ने ४ छोराको स्याहार सुसार गर्दै आएका लक्ष्मणलाई पुत्र वियोग परेको छ । जेठो छोरा २९ वर्षीय सरोज तामाङको मृत्यु भएको हो।
तामाङ परिवारमा २ छोरा र २ छोरी चार जना नै दृष्टिविहिन भएर थला परेका थिए। सहयोगको अपिल गर्दै केही युट्युव च्यानलहरुले उनीहरुबारे समाचार बनाएका थिए । जन्मँदा स्वस्थ जन्मिएका उनीहरुमा उमेर बढ्दै जाँदा दृष्टिविहिन भएका हुन् । उनीहरुमा ९ वर्षको उमेरदेखि अन्धोपनको समस्या देखिएको थियो। उमेर बढेसँगै शरीर कुँजो हुने र हिडडुल गर्नसमेत नसक्ने समस्या भएपछि निकै दुख गरेर लक्ष्मणले छोराछोरी हुर्काएका हुन् ।
सबैतिर जँचाउँदा पनि रोग पत्ता नलागेपछि परिवारले हार खाएर उपचार गर्न र जँचाउनै छाडेको थियो। विदेशमा जँचाएर उपचार गराउने इच्छा परिवारको थियो। तर आर्थिक अवस्थाका कारण पूरा हुन सकेको थिएन।
जेठा सरोजको मृत्युपछि १५ देखि ३० वर्षसम्मका अर्को एक कान्छा छोरा र दुई छोरीहरु दृष्टिविहीन र शारीरिक अशक्तताका कारण घरमै आमाको स्याहारमा बसिरहेका छन्। कान्छो छोरा अलिअलि बोल्ने गरेपनि अरु भने बोल्न र हिड्न नसक्ने अवस्थामा छन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
चर्चित कोरियोग्राफर गणेश आचार्यले कसरी ९८ किलो तौल घटाए, चकित् पार्ने उपाय सुनाए
नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई लिन भदौ १० मा काबुल जाँदै ?
खुशीको खबर : बजारमा आएको एक पटक खाए महिनाभर पुग्ने गर्भनिरोधक चक्की !
February 12, 2021 goodmam
नारायणी पुलबाट हाम फालेर एक पुरुष बेपत्ता October 19, 2021